रुपन्देहीमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान चल्दै, कुन नेताले कहाबाट गरे मतदान ?? | Radio Republic 88.2 MHz
Home समाचार रुपन्देहीमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान चल्दै, कुन नेताले कहाबाट गरे मतदान ??
रुपन्देहीमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान चल्दै, कुन नेताले कहाबाट गरे मतदान ??
on: December 07, 2017 In: समाचार, स्थानियNo Comments
रुपन्देही,मंसिर २१ । रुपन्देहीमा अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि मतदान चलिरहेको छ ।
जिल्लामा रहेका उम्मेदबारले यसरी खसाले आफ्नो मत .
नवलपरासीको २ वटा मतदान केन्द्रमा बम विस्फोट, ६ जना घाइते …